SEO Zvishandiso - Ongororo yeSEOmoz Pro Toolset
China, January 13, 2011 NeChishanu, Kurume 1, 2013 Douglas Karr
Tsvaga Injini Kugonesa (SEO) inonyanya kukosha kune chero online kukura nzira. Ichokwadi kuti zvemagariro ibhemhemi kumusoro, asi chokwadi ndechekuti vangangoita makumi mapfumbamwe muzana evashandisi veInternet vanoita ongororo imwechete mukati mechikamu chepamhepo. Zvibatanidze izvo nenyaya yekuti anoshanda anotsvaga mushandisi ane chinangwa chekutenga danho rekutenga yakawanda yenguva… uye iwe unokurumidza kutanga kuona kuti nei mabhizinesi ese achifanira kuve neyakajeka nzira yepamhepo inosanganisira yekutsvaga injini optimization.
Kana usati watora nguva yacho kuti uongorore SEOmoz Pro zvishandiso, Ndiri kuenda kukukurudzira kuti. Izvo zvinosetsa ndezvekuti iwe haufanire kunge uri Pro yekuishandisa - zvakapesana. Chishandiso chemidziyo chinogona kutora chero munhu ane hanya nekuvandudza kwavo chinzvimbo pane injini dzekutsvaga uye nekuvapa iwo akazara maturusi akakosha kukwidziridza yavo saiti uye kupfuura makwikwi. Isu tave kuburitsa mapakeji kune yega yevatengi vedu.
Ivo vanhu vakanaka paSEOmoz vakatibvumidzawo kupa iyo account mune yedu 2,500th blog post kupemberera - iyo yakahwinhwa naMack Earnhardt weAgile Kukurukurirana. (Kune toni yemubairo ichiripo - ive shuwa ku nyora kubheta redu nekudzvanya kunyorera chinongedzo mumusoro).
Sekutenda-iwe, ini ndaida kunyora zvakadzama ongororo iyo inotaura kune matatu akasimba maficha eSEOmoz Pro Toolset:
Yevhiki nevhiki kukambaira kuongororwa uye chinzvimbo chekutevera: Iyo software inokambaira saiti vhiki rega rega uye inozivisa mushandisi wezve nyaya zvinogona kukanganisa chinzvimbo mashandiro. Mazwi akakosha anoteedzerwa masiteki muGoogle, Bing, uye Yahoo pamusoro pevanokwikwidza.
Yemakwikwi yekubatanidza kuongorora: Nzwisisa kuti ndeapi mawebhusaiti ari kubatanidza kune vako vanokwikwidza, uchivabatsira kukwirisa zvirinani. Target masaiti aya kuti anyorwe uye nekuvandudza yako kuita.
Pa-Peji Kugadziridza: Mufananidzo wekuti mushandisi ari-peji kiyi mazwi ari kuita sei. Makira akareruka uye yakadzama peji ongororo inobatsira kunongedza nzvimbo hombe dzekuvandudza uye nekupa yakadzama kurudziro yemabatiro ekuvandudza pane-peji peji.
Kana iwe uri wekutarisa vateereri iri muUnited States uye iwe uri kutsvaga kuongorora, kuongorora uye kugadzirisa yako yekutsvaga injini mhedzisiro, SEOmoz Pro chishandiso chinodiwa.
Tags: seomozseomoz maturusi
Mar 1, 2011 pa 4: 17 PM
Hei Douglas ini ndangobva kutora SEOmoz pane yavo 1month yemahara muedzo 🙂… ini ndanga ndichingotsvaga kwese kwese kuongororwa uye ndikawana iyi posvo, yakanaka kunyora-kumusoro! Ini handisati ndawana nguva yekushandisa account yangu asi asi ndichaita nekukurumidza sekuda kuziva kuti ndinyore yakazara nguva! Iwe unotaura nezvevateereri veUS, ini ndiri kuUK uye ndinonanga kunyanya UK uye kune vamwe vatengi Europe zvakare - izvi zvichave zvinondibatsira here?
Mar 1, 2011 pa 4: 57 PM
Hi Chester, ungangoda kutarisa gShiftLabs, ivo vanokutendera iwe kuteedzera pasirese.
Kutumirwa kubva kuPad ​​yangu
Mar 1, 2011 pa 5: 58 PM
Ndatenda nekurudziro ini ndaenda kuti nditarise izvozvi 🙂
Jun 26, 2011 pa5: 48AM
Hi Douglas, tanga tichishandisa SEOmoz Pro kwemwedzi mishoma nevatengi vemuno muPhilippines uye zvinoshanda zvakanaka. Kwete chokwadi kana paine chimwe chinhu chandiri kushaiwa. Kuchengeta kujekesa? Ndatenda!
Jun 26, 2011 pa6: 24AM
Izvo zvakanaka kunzwa! Pandanga ndichiedza kuyedza mimwe mibairo yeEurope kareko, ini handina kukwanisa kuwana yakawanda info. Ini ndichaipa imwe whirl!
Aug 22, 2011 pa 3: 36 AM
Ndichazviedza. Mahara kuyedza kwemwedzi mumwe. Saka, rega uone.
Apr 29, 2012 pa 3: 35 PM
ndatenda, ndiwo ongororo inonakidza
May 28, 2012 pa 10: 16 AM
SEOmoz chishandiso chakamisikidzwa chinofanirwa kuve chese maSEO uye vanhu vakazvimirira vane chekuita nezveinjini dzekutsvaga uye vanoda kuunza mawebhusaiti avo papeji rekutanga remainjini ekutsvaga nekukurumidza sezvazvinogona.
May 28, 2012 pa 6: 04 PM
Ndatenda nekugovana ongororo yako. Kunyangwe iwe kwaive kuongorora kuri nyore, uyu mutsara wakandiwana: izvi hazvisi zve pros. Ini ndaitya kuti ndaizofanira kurasikirwa neyakawanda nguva uye nesimba. Ndatenda!
Ingovenga yavo yemakadhi echikwereti, ini ndoda kubhadhara nepaypal.